Awufuni ukuthatha izingozi ekuthumeleni kwakho kokuqala, ngakho-ke ukwehlukanisa isisekelo sababhalisile bakho kubabhalisi bakho ababandakanyeke kakhulu kubalulekile. Uma othile engakaze avule noma achofoze i-imeyili ezinyangeni… mhlawumbe awufuni ukuba nabo kumikhankaso yakho yokufudumala ye-IP.
Ubunhloli Besizinda - Izincomo eziningi zokufudumala kwe-IP zimane zikutshele ukuthi uhlaziye i-imeyili yakho nge-ISP; noma kunjalo, lokho akulula njengokuhlola isizinda sekheli le-imeyili. Empeleni sixazulula isizinda futhi siba nokuqonda ukuthi iyiphi insizakalo abayisebenzisayo ukukhulisa imikhankaso. Lokhu kubalulekile ngezinkampani ze-B2B ezithumela ngokuyinhloko kwizizinda zebhizinisi hhayi ama-imeyili abathengi ajwayelekile.
Sisebenzela ukuthuthukisa ipulatifomu ngokuqhubekayo ngezixhumi zedatha futhi sithumela okuhleliwe nge-API ukuze izinkampani zenze okuncane. Kuleli qophelo, kuyinsizakalo yangemuva kokugcina - kepha sisebenza ngokuqinile ekugcineni nangaphambili kwalokhu kuthuthukiswa.
Uma ulungiselela ukuthuthela Kumhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili omusha, manje yisikhathi esihle sokusebenzisa ipulatifomu njengoba sisekela ngokwengeziwe futhi sisebenzelana kakhulu namakhasimende ethu!
Ukudalulwa: Nginguzakwethu ku- IP efudumele.